Gerard Ramamimampionona “Minisitra miasa, manompo vahoaka no andrasana”
Tombony ho an`ny governemanata ny fisian`ny fahasamihafana ho an`ireo mpikambana mandrafitra azy.
Olona vonona hiasa sy hiasa haingana hanatrarana ny fampandrosoana ny minisitra ka andrasana ny asan`izy ireo, hoy i Gerard Noel Ramamimampionona, filoha lefitry ny filakevitry ny Fampihavanam-pirenena. Minisitra miasa, manompo vahoaka ao ambadiky ny governemanta. Noho izany dia andrasana izay asa sy fifampatokisana ary fihavanana. Raha ampahany no tsy mandeha dia mandringa foana ny raharaham-pirenena, hoy izy. Ny fifampitokisana no ilaina. Raha misy zavatra tian`ny fanjakana atao dia ny minisitra no manao izay hamerenana ny fahatokisan`ny vahoaka. Zava-dehibe ihany koa ny fandraisana tsara ny toromarika avy amin`ny filoham-pirenena, indrindra mijery ny laharaham-pahamena any amin`ny vahoaka, hoy hatrany ny fanazavana.